श्रीमानले बञ्चरोले हानेर गरे श्रीमतीको हत्या
श्रीमतीका लागि श्रीमान राक्षस बन्दा
शुक्रबार ४ असार, २०७८
बिहिवार । दाङको घोराहीमा श्रीमानको ब’ञ्चरो प्र’हारबा’ट श्री’मतीको मृ’त्यु भएको छ।
घोराही उपमहानगरपालिका वडा नं. ३ बेलुवा निवासी ५७ वर्षीय मुकुन्दलाल चौधरीको ब’ञ्चरो प्र’हारबाट घा’इते ४६ वर्षीया स्याना कुमारी चौधरीको बिहीबार उपचारका क्रममा मृत्यु भएको हो।
बुधबार बेलुका पौने ६ बजेतिर बञ्च’रोले टा’उकोमा प्र’हार ग’री ग’म्भीर घा’इते तुल्याएका थिए।
घाइते स्याना कुमारीको उपचारका क्रममा मेडिकल कलेज कोहलपुरमा बिहीबार दिउँसो १ः४० बजे मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी प्रवक्ता डिएसपी मुकुन्दप्रसाद रिजालले बताए।
सामान्य घरायसी विवादका कारण श्रीमानले श्रीमतीलाई ब’ञ्चरो प्र’हार ग’रेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट खुल्न आएको डिएसपी रिजालले जानकारी दिए।
आरोपित मुकुन्दलाललाई प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको छ।
कोभिड कोषमा हेफरको रु २७ लाख सहयोग
कोभिड–१९ विरुद्ध जुध्न हेफर इन्टरनेशनल नेपालले तनहुँको चार स्थानीय तहमा रु २७ लाख सहयोग गरेको छ । हेफर इन्टरेनशनले आफ्नो कार्यक्रम सञ्चालन भएका पालिकाको कोभिड कोषमा आर्थिक सहयोग गरेको हो ।
हेफरले देवघाट गाउँपालिकालाई रु १५ लाख, भिमाद नगरपालिकालाई रु चार लाख, व्यास नगरपालिकालाई रु चार लाख र शुक्लागण्डकी नगरपालिकालाई रु चार लाख सहयोग गरेको छ । महिला समूह समन्वय समिति, चक्रवर्ती सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्था र समृद्धिको लागि त्रिपक्षीय आयोगलगायतका तीन संस्थाको सहकार्यमा कोभिडविरुद्ध जुध्नका लागि देवघाटलाई रु १५ लाख सहयोग गरिएको संस्थाका चितवन जिल्ला क्लष्टर प्रबन्धक कृष्णबाबु कट्टेलले जानकारी दिनुभयो ।
उक्त रकम अक्सिजन सिलिण्डर, लिक्विड अक्सिजन, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, भेन्टिलेटर, आइसीयू, एक्सरे मेसिन, आइसोलेशन तथा कोभिड अस्पताल निर्माण, स्वास्थ्य सामग्री खरिदमा खर्च गर्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो । देवघाट गाउँपालिकाका अध्यक्ष दुर्गबहादुर थापाले कोभिड नियन्त्रणका लागि गैरसरकारी संस्थाको तर्फबाट ठूलो रकम सहयोग प्राप्त भएको भन्दै संस्थाप्रति आभार व्यक्त गर्नुभयो । थापाले हेफरसँग सहकार्य गरेर गाउँपालिका अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैगरी भिमाद नगरपालिकालाई रु चार लाख हस्तान्तरण गरिएको छ । माझकोट महिला बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्था, अतिप्रिय सामाजिक उद्यमी सहकारी संस्था, अरुणोदय सामाजिक उद्यमी महिला सहकारी संस्थाको तर्फबाट नगरप्रमुख मेखबहादुर थापालाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गरिएको हो । माझकोटकी अध्यक्ष सङ्गीता राना, अतिप्रियकी अध्यक्ष देवी मोक्तान आले र नेपाल एकीकृत ग्रामीण विकास केन्द्रकी अध्यक्ष मनुमाया श्रेष्ठले नगरप्रमुख मेखबहादुर थापालाई उक्त रकमको चेक हस्तान्तरण गर्नुभयो ।
हेफर इन्टरनेशनल नेपालका कार्यक्रम अधिकृत सन्त भट्टराईले सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्दै हेफरको कार्यक्रम सञ्चालित पालिकामा सहयोग गर्न पाएकामा खुशी व्यक्त गर्नुभयो । नगरप्रमुख थापाले हेफरको सहयोगप्रति आभार व्यक्त गर्दै प्राप्त रकम कोभिड सङ्क्रमितको उपचारमा खर्च गरिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
बिना हेल्मेट मापसले खुट्टा टेक्न नसकी बाइक चलाइका पारसलाई प्रहरीको उल्टै सम्मान !
नेपाल प्रहरीलाई अर्को ठूलो सफलता : ३३ किलो सुन काण्डमा संलग्न फरार प्रतिवादी पक्राउ
घरमा किरा आइरहन्थे, खनेर हेर्दा उड्यो सबैको होस !
सावधान : तपाईका छोरी चेलीपनि यसरी फस्लान् है !
प्रहरी पुग्दा घरमा टिभी हेरिरहेका विजय शाहीले आफ्नो मृत्युको खबर आफैं किन फैलाए
‘मेमोरी किङ्ग विजय शाही’ निधनको सन्देश भाइरल, सत्यता के हो ?
महाराजगञ्जबाट नक्कली चिकित्सक पक्राउ, डाक्टर बन्न यतिसम्म गरेछन्
यो रहस्यमयी दरबारकाण्ड अहिले भएका यिनीहरुले नै घटाएको हो भन्ने सकिन्न !
दाजु बहिनीको गलत सम्बन्ध नै सुजिता भण्डारीको मृत्युको कारण
सन्तोष देउजालाई लाग्यो अर्को आरोप, महिलाहरु आए मिडियामा
मोडल निशा घिमिरेलाई हस्पिटल भित्रै बि’ष खु’वाउन भाइ बनेर सेक्युरिटी तोडेर भित्र जानेको गोप्य प्रमाण भेटियो
आज एकैदिन ८ जना मृत अवस्थामा फेला
६ जना युवा र २ जना युवती मृत फेला
पैसा खाएर भाग्ने बिष्णु पक्राउ
काठमाडौको भीआईपी तास अड्डाबाट २० जना महिला पुरुष पक्राउ